Tiorkia: Fifandimbiasam-baovao Ara-tsosialy Mikasika Ny Fibodoana An’i Gezi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jona 2013 4:03 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Nederlands, Ελληνικά, македонски, русский, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Português, English
Ny 10 Aprily 2013, tenifototra iray tao amin'ny tontolon'ny bitsika no nanambara ny #ayagakalk (izay hadika hoe “mitsangàna”). Antso avy aminà vondrona kelin'ireo mahery fò izay miezaka miaro ny kianja Gezi ao Taksim, manohitra ireo drafitra fanorenana tranombarotra goavana- eo amin'ilay faritra. Tsy nisy nihevitra io trangan-javatra kely io hivadika ho fanoherana goavana tao anatin'ny tantara repoblikanan'ny firenena. Ao anatin'ny tenin'ilay mpampiasa Twitter, Ezgi Medran, izay niezaka nanangona sonia ny 10 Aprily ho an'ilay hetsi-panoherana voalohany izay noeritreretina hatao ny 13 Aprily [tr]:
Toy ny fety no nanombohan'ny fanoherana, izay natao ny 13 Aprily. Nanoratra ilay mahery fò mpiaro Tontolo Iainana Barış Gençer Baykan:
Tsy nisy tahirin-tsary mikasika ireo fifandonan'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpanohitra tamin'io fotoana io. Ny 27 May, fihetsiketsehana iray hafa koa no nitsangana, mitovy tanjona tamin'ny teo. Tamin'ity indray mitoraka ity, mahery fò vitsivitsy no nibodo ny kianja Gezi hijoro hanohitra ireo mpiasa amin'ilay fanorenana. Ny Media sosialy 140journs no nizara sary iray ahitàna ireo mahery fò miaraka amin'ireto teny ireto:
Nanomboka tsy voafehy ny raharaha taorian'ireo tranga roa izay niparitaka be tao amin'ny media sosialy. Ny voalohany dia ny sarin'ilay vehivavy mpanohitra tsy mitàm-piadiana notafihan'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny fampiasana entona mandatsa-dranomaso, nalain'i Osman Orsal, mpaka sary avy amin'ny Reuters. Taty aoriana, tanaty fanafihana vao maraim-be, nodoran'ny mpitandro ny filaminana ny tranolain'ireo mahery fò. Voarakitra ao amin'ny YouTube io tranga io.
Nanomboka nanao ny fanafihany an'ireo mpanohitra tamin'ny entona mandatsa-dranomaso sy ny tifitra rano ny mpitandro ny filaminana. Tafahoatra loatra raha ny entona mandatsa-dranomaso nampiasaina. Nilaza ireo mpitazana fa ny vatan'ireo mpanohitra mihtsy no kendren'ny mpitandro ny filaminana rehefa mitifitra an'ilay kapoaka misy entona mandatsa-dranomaso izy ireo. Alper Orakci, mpampiasa Twitter, no nizara ireo kapoakan'entona mandatsa-dranomaso marobe tao Istiklal Caddesi, ilay arabe migodana indrindra ao amin'ny Kianja Taksim:
Tafahoatra loatra ireo entona mandatsa-drnomaso nampiasaina hanaparitahana ireo mpano hetsi-panoherana. Sary nozarain'i @alperorakci tao amin'ny Twitter.
Osman Orsal, mpaka sarin'ny Reuters izay naka sary ilay vehivavy mpanohitra iray niankanjo mena namantarana ny hetsika, dia naratran'ny kapoakan'entona mandatsa-dranomaso iray. Benjamin Harvey, lehiben'ny birao Bloomberg Turkey, nanoratra hoe:
@BenjaminHarvey Osman Orsal, mpaka sary. Sary nalaiko tany Istanbul omaly io: http://bit.ly/11GaGa1 Inty izy ankehitriny: pic.twitter.com/8aU1vRZGjX
Tao amin'ny Facebook sy Twitter ny mpanao hetsi-panoherana no nifandamina, satria tsy nampihetsi-bolomaso ireo media mahazatra mihitsy ireo fihetsiketsehana. Nisy ireo fanehoankevitra tao amin'ny media sosialy manohitra ny ataon'ireo fantsom-pifandraisan'ny media mahazatra. Faruk erman, mpampiasa Twitter,no nizara sary iray maneho ny fahanginan'ny media Tiorka:
Niakatr'afo i Benjamin Harvey tamin'ny fandefasan'ny CNN-Turk tahirin-kevitra iray mikasika ireo pingouins nandritra ny fotoana nisian'ny fifandonana:
@BenjaminHarvey Mba marina mafy kosa e, resaka pingouins izao no alefan'ny CNN-Turk
Ireo mpomba ny AKP (Antokon'ny Fampandrosoana sy ny Fahamarinana ), antoko eo amin'ny fitondrana ao Tiorkia, dia nanakiana mafy an'ireo mpanao fihetsiketsehna noho ilay fifandonana. Naneho hevitra teo ambanin'ny tenifototra n'ny#oyunagelmeturkiyem (“aza kivy, Tiorka”) izy ireo tao amin'ny Twitter. Canan Kumas, mpampiasa Twitter, dia nanoratra hoe:
@Canan_Hasret Tayyip tsy nanao n'inona n'inona afa-tsy izay hanampiana ny tanindrazana hisondrotra nandritra ny taona maro lasa ary ankehitriny ry zareo ireto te-hanongana azy amin'izay resaka kianja iray #oyunagelmetuerkiyem
Nanbohitra ireo fampitahana an'i Tiorkia amin'ny Lohataona Arabo, mpampiasa iray hafa, Bunyamin Hakimoglu no niteny hoe :
@Benj_Kobsch Aza mieritreritra lohataona aty Tiorkia izany. Voafidy tamin'ny fifidianana demokratika ny governemanta. Mba tongava saina amin'ny faha-samihafana! #OyunaGelmeTürkiyem
Etsy andaniny, nisy koa ireo tsikera teo amin'ny samy mpanohana ihany koa. Ohatra, i Ertugrul Gunay loholona avy amin'ny AKP sady minisitry ny kolotsaina sy fizahan-tany teo aloha dia tezitra noho ny haromontana ara-politikan'ny antokony natao an'ireo mpanao fihetsiketsehana:
Na dia mbola mitohy hatrany aza ny fanoherana sy ny fifandonana manerana ny firenena, ny Praiminisitra Erdogan toa tsy mihevitra ny hihemotra akory. Niteny izy tao amin'ny kaontiny Twitter hoe: